SEA Games – Gaming Noodle
[Unicode] ဆီးဂိမျးမှာ အားကစားအဖွဈ ပထမဆုံးအကွိမျပါဝငျခဲ့တဲ့ Mobile Legends အကွိမျ ၃၀မွောကျ အရှတေ့ောငျအာရှ အားကစားပွိုငျပှဲကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ ၃၀ ရကျနမှေ့ ဒီဇငျဘာလ ၁၁ ရကျနအေ့ထိ အောငျမွငျစှာကငျြးပပွီးစီးခဲ့ပါပွီ။ အရှတေ့ောငျအာရှအားကစားပွိုငျပှဲရဲ့ ထငျရှားတဲ့ ကစားပှဲမြားအနကျ Esports ပွိုငျပှဲဟာလညျး တရားဝငျအားကစားတဈမြိုးအဖွဈ ပထမဆုံးအကွိမျ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) မိုဘိုငျးဂိမျးဟာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာ ကမ်ဘာအနှံ့ လူသိမြားလာခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အရှတေ့ောငျအာရှတှငျ လူသိအမြားဆုံးဖွဈပါတယျ။ အခု MLBB ဟာဆိုရငျ အရှတေ့ောငျအာရှအားကစားပွိုငျပှဲတှငျ ခိုငျမာသောအမညျတဈခုရကာ သမိုငျးတှငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ ကိုယျစားပွုအသငျးဟာ အရှတေ့ောငျအာရှအားကစားပွိုငျပှဲရဲ့ ပထမဆုံး Esports ပွိုငျပှဲဖွဈတဲ့ Mobile Legends: Bang …
ဆီးဂိမျးမှာ အားကစားအဖွဈ ပထမဆုံးအကွိမျပါဝငျခဲ့တဲ့ Mobile Legends Read More »
[Unicode] ပထမဆုံး ဆီးဂိမျး Esports မှာ ဘယျသူတှေ ရှတေံဆိပျ ရရှိသှားခဲ့လဲ? ၂၀၁၉ အရှတေ့ောငျအာရှအားကစားပွိုငျပှဲကွီး (ဆီးဂိမျး) ရဲ့ Esports ရှတေံဆိပျဆုရှငျမြားကတော့ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါပွီ။ Esports ကို medal event အနနေဲ့ ကငျြးပတာ ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈလို့ ယခုရှတေံဆိပျဆုရှငျမြားဟာလညျး အီလကျထရောနဈအားကစားသမိုငျးမှာ ဦးဦးဖြားဖြား ရှရေရှိသူမြားအဖွဈ မျောကှနျးတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဆီးဂိမျးအတှငျး ထညျ့သှငျးကငျြးပခဲ့တဲ့ Esports အမြိုးအစားမြားကတော့ MLBB, Hearthstone, AoV, Dota 2, StarCraft II နဲ့ Tekken7တို့ပါ။ MLBB: Sibol – MLBB (ဖိလဈပိုငျ) ဆီးဂိမျး MLBB ပွိုငျပှဲ နောကျဆုံးနကေို့ ဒီဇငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့ …
ပထမဆုံး ဆီးဂိမျး Esports မှာ ဘယျသူတှေ ရှတေံဆိပျ ရရှိသှားခဲ့လဲ? Read More »
[Unicode] မွနျမာ Esports အသငျးတှေ SEA Games မှာ ဘာကွောငျ့အရေးနိမျ့ခဲ့ရသလဲ? အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး အခုကငျြးပသှားတဲ့ ဖိလဈပိုငျ SEA Games 2019 Esports ပွိုငျပှဲမှာ မွနျမာအသငျး ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ဂိမျး (၃) မြိုးစလုံး (Dota2, Mobile Legends, Arena of Valor) မှာ အားလုံး အုပျစုအဆငျ့ကနေ လှညျ့ပွနျလာခဲ့ရပါတယျ။ ဒါဟာ ပထမဆုံး ဆုတံဆိပျပေးအပျတဲ့ ဒသေတှငျး တရားဝငျအသိအမှတျပွု အိုလံပဈအဆငျ့ Esports ပွိုငျပှဲတဈခုအနနေဲ့ ပါဝငျယှဉျပွိုငျနတေဲ့ ကစားသမားတှရေော၊ ပရိသတျတှေ အတှကျပါ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ ရလဒျတဈခု ဖွဈပါတယျ။ Esports ကို အားပေးတဲ့ အမာခံပရိသတျတှရှေိပမေယျ့လညျး ပုံမှနျအခြိနျမှာဆိုရငျတော့ SEA Games Esports …
မွနျမာ Esports အသငျးတှေ SEA Games မှာ ဘာကွောငျ့အရေးနိမျ့ခဲ့ရသလဲ? Read More »
[Unicode] အမြိုးသမီး Pro Gamer တဈဦး ဗိုလျစှဲသှားတဲ့ Hearthstone ကမ်ဘာ့ ခနျြပီယံရှဈ ပွိုငျပှဲ တရုတျ အမြိုးသမီး Hearthstone ပရိုတဈယောကျဖွဈတဲ့ Xianmeng Li (In-game name – VKLiooon) ဟာ စနနေကေ့ ကငျြးပပွီးစီးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအကွိမျ Hearthstone GrandMasters Global Finals ပှဲမှာ အနိုငျရ ဗိုလျစှဲခဲ့ပါတယျ။ Hearthstone ဆိုတာကတော့ PC ရော Mobile မှာပါဆော့လို့ရတဲ့ Free-to-play ကဒျဂိမျးအမြိုးအစားတဈခုဖွဈပါတယျ။ Hearthstone ပွိုငျပှဲရဲ့ အဆငျ့အမွငျ့ဆုံး ပွိုငျပှဲတဈခုဖွဈတဲ့ GrandMasters Global Final တကမ်ဘာလုံးမှ လကျရညျစဈပှဲအောငျမွငျခဲ့ကွတဲ့ ကစားသမား ၈ ဦး ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး Valiant Knighthood …
အမြိုးသမီး Pro Gamer တဈဦး ဗိုလျစှဲသှားတဲ့ Hearthstone ကမ်ဘာ့ ခနျြပီယံရှဈ ပွိုငျပှဲ Read More »
SEA Games 2019 အတွက် လူရွေးချယ်မှု ပြီးစီးသွားတဲ့ အိမ်ရှင် ဖိလစ်ပိုင် လက်ရွေးစင် Esports အသင်း
[Zawgyi] SEA Games 2019 အတွက် လူရွေးချယ်မှု ပြီးစီးသွားတဲ့ အိမ်ရှင် ဖိလစ်ပိုင် လက်ရွေးစင် Esports အသင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ National Esports အသင်း ဖြစ်တဲ့ Sibol ဟာ 2019 SEA Games မှာ ပါဝင်တဲ့ esports အမျိုးအစား ၆ မျိုးလုံးကို မတူညီတဲ့ ကစားသမားများနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Sibol ရဲ့ လက်ရွေးစင် Dota2အသင်းသား လူစာရင်းနဲ့ အခြား esports အမျိုးအစားများအတွက် လူစာရင်းကတော့ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ Sibol ရဲ့ Dota2အသင်းသား လူစာရင်းထဲမှာတော့ Adroit မှ Boomy, Natsumi, …
SEA Games 2019 အတွက် လူရွေးချယ်မှု ပြီးစီးသွားတဲ့ အိမ်ရှင် ဖိလစ်ပိုင် လက်ရွေးစင် Esports အသင်း Read More »
[Zawgyi] ReckoninG Esports နှင့် လမ်းခွဲခဲ့ပြီး Team Cyanide ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ မြန်မာ Dota2 အသင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိတစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံခြား အသင်းတစ်သင်းမှာဆော့နေတဲ့ ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Kenji, ShowTi, RapRap, Insane နဲ့ Leo တို့ဟာ အိန္ဒိယအသင်း Reckoning Esports ကနေထွက်ခွာပြီး မြန်မာအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Team Cyanide ကို ပြောင်းရွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ Team Cyanide ဆိုတာဘာလဲ? Team Cyanide ဆိုတာကတော့ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ဇွန်လမှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပထမအသင်းကတော့ Mobile Legends အသင်းဖြစ်ပြီး စဖွဲ့ပြီးမကြာခင်မှာလည်း MESL ချန်ပီယံဆုကို Burmese Ghouls, Claw Esports, …
ReckoninG Esports နှင့် လမ်းခွဲခဲ့ပြီး Team Cyanide ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ မြန်မာ Dota2 အသင်း Read More »
Philippines SEA GAMES 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် Dota2 အသင်းတွေကို ကူညီလေ့ကျင့်ပေးမယ့် Evil Geniuses
[Zawgyi] Evil Geniuses မှ SEA Games 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် လာရောက်လေ့ကျင့်ပေးမည် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ကျင်းပမယ့် SEA Games 2019 မှာ Dota2အပါအဝင် esports ပြိုင်ပွဲများကို ထည့်သွင်းထားလို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ကစားသမားများဟာ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ရမယ့် အချိန်ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ TI5 ချန်ပီယံဟောင်းအသင်းဖြစ်သလို မြောက်အမေရိကရဲ့အင်အားကြီး Dota2အသင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Evil Geniuses ဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ Razer’s SEA Games Esports Bootcamp ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိလာမှာပါ။ လက်ရှိ Evil Geniuses အသင်းမှာ ကစားသမားများအဖြစ် …
Philippines SEA GAMES 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် Dota2 အသင်းတွေကို ကူညီလေ့ကျင့်ပေးမယ့် Evil Geniuses Read More »
Gamer တွေ ဆယ်နှစ်တိတိ ပီဇာဖရီးစားနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
[Zawgyi] Gamer တွေ ဆယ်နှစ်တိတိ ပီဇာဖရီးစားနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပမယ့် 2019 ဖိလစ်ပိုင်ဆီးဂိမ်းမှာ Esports ဟာ ဆုတံဆိပ်ပေးအပ်မယ့် ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ ဂိမ်း ၆ ခုအထိ ပါလာမယ်လို့ ကြေညာထားပေမယ့် ယခုအချိန်အထိတော့ ဂိမ်း (၅) မျိုးကိုသာ အတည်ပြုထားပါသေးတယ်။ အဲဒီဂိမ်းတွေကတော့ PC ဂိမ်းမှာဆို Dota2 နဲ့ Starcraft II ၊ Console မှာဆိုရင် Tekken7နဲ့ Mobile မှာ Arena of Valor (AOV) နဲ့ Mobile Legends တို့ပါ။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ SEA အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် ယခုအချိန်မှာ အသဲအသန် ပြင်ဆင်နေပြီး …
Gamer တွေ ဆယ်နှစ်တိတိ ပီဇာဖရီးစားနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး Read More »
ဆီးဂိမ်းအကြို ML ပြိုင်ပွဲကို စင်ကာပူမှာ သွားပြိုင်မယ့် Burmese Ghouls
ဆီးဂိမ်းအကြို ML ပြိုင်ပွဲကို စင်ကာပူမှာ သွားပြိုင်မယ့် Burmese Ghouls =============================================== အရှေ့တောင်အာရှက အင်အားကြီး Mobile Legends အသင်းတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် SEA Clash of Champions ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ Burmese Ghouls Mobile Legends အသင်းက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Reddentes Sports က ဦးစီးကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲဟာ မေလ ၁၈ နဲ့ ၁၉ ရက်နေ့တွေမှာ Singapore နိုင်ငံက Suntec City Convention Center Hall မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Burmese Ghouls နဲ့အတူ လက်ရှိပူပူနွေးနွေး SEA Game မှာ Singapore ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိထားတဲ့ …
ဆီးဂိမ်းအကြို ML ပြိုင်ပွဲကို စင်ကာပူမှာ သွားပြိုင်မယ့် Burmese Ghouls Read More »